Bentley Geopak, aragti hore - Geofumadas
Nofeembar, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Like (ma) waxa ay bixisaa AutoDesk Civil 3D, Geopak waa taxane ah oo codsiyada Civil Engineering Bentley oo u shaqeeya sahan, lagu daydo dhul digital, design wadada iyo geotechnics qaar ka mid ah waxaa la sameeyey. Inkastoo dambe ay horey u ogaadaan in la catapulted ka dib markii barashada afku ee gINT Software.
Marka la rakibo, ma abuurayo astaanta gaarka ah ee Geopak, marka socodka Microstation waxaa si toos ah u dhaqdhaqaaqa. Haddii aysan dhicin, waxaa lagu sameeyaa gudaha Codsiyada> Bentley Civil> Activate Bentley Civil
Taas waxaa ka mid ah Geopak.
Marka la eego guud ahaan, sida Bentley Civil oo ka kooban shaqooyin kala duwan, Awoodda Shacabka waa kala duwanaansho qalab ka yar iyo qaar u qabsoomay bii'adda Hispanic sida Awooda Awooda ee Spain.
Waxqabadka Bentley Civil waa:
In kasta oo ay tahay sancocho qalabka ayaa la hagaajiyay maaraynta shaqada meesha ay ku taxan yihiin heerka hawsha ee habka soo socdo:
Qorshayaasha Preps & Tirada
Tani waa hab fiican oo loo shaqeyn karo, sababtoo ah inkasta oo qaar soo noqnoqonayaan, way fududahay in la isticmaalo sababta oo ah iyaga ayaa loo kala qeybiyaa iyadoo loo eegayo isticmaalka caadiga ah sida:
Baaritaan: Waxaa ka mid ah hawlaha lagu soo dejiyo xogta qashin-sidaha / gps qalabka, u habee, samaynta saxaarada kala duwan, dhoofinta qaabab kale, dib ugu diraan goobta, iwm.
Site: Waxaa ka mid ah xakamaynta mugga, diyaarinta mashaariicda, jarista, naqshadaha waddooyinka iyo magaaleynta.
Qalabka DTM: Tani waxay ku jirtaa heerka guud si loo dhiso qaabab dijitaal ah, goobo, profiles, iwm. Inkasta oo qalabka lagama maarmaanka u ah Site iyo Survey waxaa lagu wadaagaa halkaas, sida abuurista khariidadaha jilicsan, shaqeynaya soo dejinta ama dhoofinta, iwm.
Sida ka shaqeynayaan, dunida waa mid aad u kala duwan oo ka Civil3D, oo waxaan u maleynayaa waa ka la taaban karo sababtoo ah waxaa la kala walxaha iyo goobaha, halka Geopak weli at heerka shaqooyinka, mashaariicda iyo arrimo. Sida Microstation oo leh AutoCAD, Bentley Civil waxay qaadataa dhowr maalmood si ay u dejiso caqli-galka dadka, hase yeeshee way sii jirtey, haddii aad is barbardhigto Bentley Site V8i leh SiteWorks 95.
Waxkaqabashada waxqabadka qalabka: ixtiraamkayga. Nidaamka 230,000 ee IGN dwg oo aad i soo diray saaxiibkii Guatemala maalintii kale, in Civil3D dhigaysa burburkii mishiinka afar daqiiqo, sii daayo dadka caaya fariin xasuusta ku filnayn. Geopack joogay 42 daqiiqo, jeestay pleca iyo muujinaysa sida walxo badan lahaa, laakiin uu ugu danbeyn noqday breaklines ah oo wuxuu galay GSF ah oo u soo jeestay in TIN daqiiqadii 2. Processor ayaa u yimid inay 49% iyo Dhanka kale, xusuusta PC si joogto ah waxay ahayd in ay sii samaynta waxyaabo kale.
Waan arki doonaa sida loo sameeyo isla jimicsi isku mid ah oo aan hore u aragney 3D Madani.
Post Previous«Previous Isku-dubaridka UTM ee Google Earth
Post Next In ka badan 60 Autolisp habka loogu talagalay AutoCADNext »